EGGPLANTIS: CUNNOOYINKA UGU DHAQSAHA BADAN LEH EE LA KARIYEY DABACASAHA, TOONTA IYO CAGAARKA DIGSI JIILAALKA, OO LEH KAABAJKA IYO CELERY, KHUDAARTA LA KARIYEY, SAWIR - WIXII MARTIDA
Nidaamka halsano ee khudradda iyo miraha waxay ka caawisaa kordhinta noloshooda shelf, si loo ilaaliyo qiimaha nafaqada.
Marka la xoqdo, khudaarta iyo miraha waxay noqdaan dhadhan aan caadi ahayn iyo caraf udgoon. Habkani waa khudaarta goosashada ee jiilaalka waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn.
Beerta loo yaqaan "eggplants" ayaa ku wanaagsan in lagu daro khudaarta kale ama hilibka, iyo sidoo kale saxan gooni ah. Markaad adeegeysid, waxaad u gooyn kartaa goobo, ama waad cuni kartaa gebi ahaanba. Haddii martida degdega ah ay soo degaan, waxaad had iyo jeer heli kartaa weel diyaar u ah eggplants pickled iyo la yaab leh fudud, laakiin sidoo kale saxan aan caadi ahayn.
Waa maxay nidaamkan?
Caano-celintu waa mid ka mid ah siyaabaha lagu gooyo dalagyada, berry iyo miraha xilliga qaboobaha, taas oo ah natiijada, taas oo ah geeddi-socodka farsamooyinka kiimikada, lactic acid ayaa soo baxa, taas oo ah dabiici ah dabiici ah. Khudaarta la kariyay (broten) ama dhammaan xawaashka shimbiraha (ama waa la jarjarey, la jarjarey, la jarjarey), cusbo ku daray, saameynta bakteeriyada lactic acid, halsano (halsano). Salt looma tixgeliyo qayb muhiim ah, wuxuu saameeyaa dhadhanka wuxuuna joojiyaa abuurista cudurada.
Caawin! Saltiga brine waxaa la qaadaa qiyaasta 5% qadarka biyaha, iyo halsano ee casiir shakhsi ahaana saamiga 1.5-2% miisaanka khudradda.
Ereyga halsano wuxuu ku xiran yahay dhowr arrimood:
qadar milix ah.
Cuntada la dooran karo?
Waa maxay ukunta u wanaagsan si loo kariyo xilliga qaboobaha: saliid ama saladh? Salting iyo halsano hababka loo yaqaan ee kaydinta miraha iyo khudaarta. Salt iyo lactic acid waxaa loo tixgeliyaa wakiillada ugu muhiimsan ilaalinta. Waxay horjoogsadaan sameynta mishiinka waxyeellada leh iyo ilaalinta miraha iyo khudradaha ka soo jeeda.
Lactic acid aad ayey muhiim u tahay jirka bini'aadamka. Waxay u taagan tahay dhadhanka cusub iyo ma aha sidii lebis iyo basbaas. In khudaar halsano ah waxaa jira qadar badan oo lactic acid ah, iyo cusbadu waxay ku badan tahay saliidda.
Khudraddaas laguma saari karo khudaarta leh nolol shafeeco dheer. Laakiin haddii aad u hogaansanto shuruudo gaar ah, waa la badbaadin karaa mudo dheer. Liiska siyaabaha:
In meel mugdi ah (dhulka hoostiisa, qolka, maqaarka).
Qoryo qoryo ku seexi.
Ku qaboojinta qaboojiyaha.
Waa maxay nooca khudaarta?
Nidaamkan, waxaa lagama maarmaan ah in la qaato khudaar dhexdhexaad ah (illaa 10-12 centimitir dherer), dhalinyaro, maqaarka khafiif ah oo aan dhaawac lahayn iyo dhibco madow. Waa inay sidoo kale noqdaan kuwo siman, cufan iyo dabacsanaan leh.
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo waxyeelada saxanka?
Markaad isticmaasho ukunta, jidhku wuxuu helayaa faa'iidooyin badan. Guryahooda faa'iidada leh waxay ku yaalaan kiimikada kiimikada, waxaa ka mid ah:
macdanta sida birta, sodium, sulfur, magnesium, calcium, chromium, potassium, zinc, iodine, aluminium, manganese, molybdenum;
sonkorta dabiiciga ah;
fitamiino kala duwan;
Eggplants waa ka hortaga:
Cudurka foosha, cudurada duodenka, xanuunka qanjirada ba'an iyo boogaha.
Iyadoo ay sii xumaanayso gout.
DAREEN! Waa inaadan u isticmaalin khudraddaas qaabab badan, sababtoo ah waxay ku jiraan waxyaabo badan oo ah solanine, taas oo ah sunta jidhka. Sidaa daraadeed, waa inaad cuntaa oo keliya dhalinyaro, ukunta bisil ama caddaan - ma jirto cadanin iyaga.
Waa maxay suxuunta ku haboon?
Cunto-gelinta ukunta la kariyey waa la helaa marka la kariyo digsi dhaldhalaalka ah, ama alwaax iyo dhar alwaax ah. Hase yeeshee, waxaad ku dhalaali kartaa dhalooyinka, laakiin waa lagama maarmaan inaad ku hayso weelalahan ka fog iftiinka qorraxda. Tar waa in la dhaqaa oo la daboolaa biyo karkaraya.
Wax kale oo lagu daro maaha
Blue - laba qeybood.
Wixii marinade ah: hal litir oo dareere ah - 30 garaam oo cusbo, laba caleemo ah iyo afar digir oo allspice ah.
Kari khudaarta laga bilaabo 5 ilaa 7 daqiiqo oo ah brine (hal galaas oo cusbo ah halkii litir oo dareere ah), ka hor dhejin fargeeto ah.
Dhamaadka xilliga karinta, ka saar oo u ogolow waqti si aad u daadiso.
Ku dar toonta iyo basbaaska madow ilaa qaybta dheer.
Ku rid bacaha qashin dhaadheer oo ku shub marinade.
Marka xigta, ku dabool weelka daboolka oo ku rid qaboojiyaha, ama meel qabow mudo laba toddobaad ah.
Dufan leh cagaar iyo waxyaabo kale
Tixgeli mid ka mid ah cuntooyinka ugu dhaqsiyaha badan: karinta jiilaalka a eggplant dufan leh caleemaha iyo cagaarka leh toonta digsi.
8 kiiloogaraam oo eggplant ah;
2 kiilo oo karootada ah;
400 garaam oo toon ah;
100 millilitir oo saliid ah gabbaldayaha.
Isku darka peduncada si wadajir leh oo jarjar googooyo u jarjar galka ukunta.
Ka dibna ku dhaji biyo karkaraya oo isku kari ilaa shan daqiiqo biyo cusbayn.
Khudradda la kariyey ayaa la dhigayaa mid ka mid ah korka sare ee kale oo lagu daboolay harqood si ay uga takhalusaan biyaha xad-dhaafka ah.
Karootada xawaashka iyo isku shiishaa subagga.
U qaado toonta adoo adeegsanaya saxaanka toonta ah, oo aad dhirtid dhirtu ma ah mid aad u caan ah.
Toonta la diyaariyey iyo dhir ayaa lagu daraa karootada, cusbo ayaa lagu daraa.
Marka eggplants qabow, ku buuxi hal ama laba qaado oo ah walxo isku darka.
Khudaarta khudradda ayaa lagu meeleeyaa weel waxayna ku waraabisay brine (1.5 qaado oo cusbo ah halkii litir ee dareeraha).
Weelka waxaa la dhigayaa kuleylka. Iyadoo ku xiran bataatada aasaasiga ah ee dabiiciga ah karkari 3 ilaa 5 maalmood.
Qodobka maaddooyinka oo la isku qurxiyo oo la kariyey:
Hal kiilo oo ukunta.
Laba xabo oo toon ah.
2 rucubood ee celery.
Laba ama saddex caleemo.
50 ml oo saliid ah gabbaldayaha.
Ka qaad asliga ah iyo jarjar.
Bacriminta karkariyo biyaha cusbada leh (qiyaastii laba qaado oo milix ah hal litir oo dareere) ilaa 15 illaa 20 daqiiqo ilaa diyaar.
Khudaarta la karkariyey qabow oo ka takhalus dheecaanka xad-dhaafka ah.
Iska yaree toonta iyo celceliska qaybo waaweyn.
Maaddooyinka diyaarka ah ee la isku dayo in la gooyo ukunta.
Ku rid bataatada ku jirta caag caano leh oo ku shub brine qabow (2.5-3 tbsp. Saliid halkii 1 litir oo biyo ah).
Dabool oo ka tag si aad u kululaatid saddex maalmood.
Ka dib markii lagu daray saliidda gabbaldayaha iyo qaboojiyaha.
Hadda cunto karinta ee loo yaqaan pickled eggplanted cufan iyo karootada.
1,650 kg of eggplants;
500 garaam oo kaabajka cad;
laba basbool leh;
laba ama saddex xabo oo toon ah;
0.5 litir oo biyo ah;
2, 5 tbsp. l cusbo, basbaas dhulka.
Ku dhaq boomaatada, caleemaha ka saar oo ku dheji fargeetada.
Karkari biyaha oo ku shub 5 daqiiqo.
Carrot jilicsan oo shabaggeedii, kuus oo kaabajka ah.
Meelaha la jeexjeexay ayaa jarjaraya.
Iska xoqdo toonta.
Dhammaan qaybaha waa isku dhafan, milix iyo basbaas, ha daaqin ilaa 20 daqiiqo.
Khudaarta ayaa la jarjarey eggplant.
Isticmaalka biyaha iyo cusbada, waxaanu diyaarinaa brine, taas oo markaa loo baahan yahay in la qaboojiyo.
Ku rid eggplants leh buuxinta weelka, ku dar qajaar la jarjarey oo riix hoos u dheji.
Isku diiri saddex maalmood. Ka dib markii lagu daray saliidda gabbaldayaha iyo qaboojiyaha.
Recipe in baytari
5 qaado oo ah khaanadaha cuntada;
Iska yaree eggplants galay xaleef hal mitir ah, ku rusheey milix iyo ha u istaag 30 daqiiqo.
Ka dibna biyo raaci biyo qabow.
Ku garaac ukunta wax yar.
Ku dar wareeg kasta oo eggplant ah isku dar ah ukunta, ka dibna duuduubiinka xayawaanka.
Waxaad ku shiishaa digsi saliid ku jirta dhinac kasta ilaa brown dahabka ah.
Habka ugu fudud
Eggplant - 350 garaam.
Basasha - 60 garaam.
Garlic - 10 garaam.
Saliidda dhirta - shiilan.
Sonkor - nus shaaha.
Sisin 6% - 1.5 tsp.
Ku dhaq balka ukunta, iska saar jirida.
Iska yaree calaamadaha.
Ku dabool cusbo ku jirta baaquli, ha u istaag 30 daqiiqo.
Peel iyo garooji siddooyinka basasha.
Ku dar sonkorta iyo milixda, khal.
U ogolow basasha marinate.
Ka saar balaag ka soo qoyaan xad dhaaf ah.
Khudradda khudaarta ku shub 10 daqiiqo.
Maxaa kale oo aan ku dari karaa?
Khudradani waxay si fiican u socotaa khudaarta kale, tusaale ahaan:
U fiirso sawirkii cuntooyinka loogu talagalay ukunta la kariyey ee toonta iyo caleemaha xilliga jiilaalka.
Sidee loo kaydiyaa?
Well si fiican loo dhawray eggplants pickled qaboojiyaha. Waxay u baahan yihiin in lagu rido dhalooyinka, ku rid culayska, ku dar saliide yar si looga fogaado hannaanka halsano kale.
Eggplants waa in la gooyaa fargeeto ah, tani waxay ka hortagi doontaa khudradda daaqsinka.
Ukunta la karkariyey waa in lagu qabtaa culeys si looga saaro biyaha xad-dhaafka ah.
Ma ahan lagama maarmaan in lagu xiro tuubada si qarsoodi ah, sidaa darteed brineka ayaa buuxiya dhamaan dalqaadka wuxuuna u soo baxayaa inuu noqondoono hawo, sababtoo ah waxay ka sii dari doonaan.
Ha u ogolaan dheefshiidka ukunta.
Beerta loo yaqaan 'eggplants' ayaa ku haboon suxuunta hilibka iyo khudradda. Ka hor intaadan adeegin, waa in lagu daadiyaa saliid gabbaldayaha ama suugo soy ah. Maalmaha ciidaha, ukunta la kariyey ayaa noqon doona cunto aad u wanaagsan guriga.
Ukunta qashinka ah ee loo yaqaan 'snack' ayaa ah "guntin wayn" oo loogu talagalay xaflad kasta oo loogu talagalay fasax iyo casho labadaba. In eggplants kuwan waxaa jira wax aan saliid lahayn, sidaa darteed beerka ma cadaadis, sida ka dib.
Faa'iidada badeecadani waa dhadhan wacan ee dabacsanaan, taas oo aan la helin sababtoo ah ku darista khal, laakiin waxay sababtay hannaanka halsano.